Abantu abangama-41 babulawa, uninzi lwalahleka e-India kubetheka komhlaba kunye nezikhukula
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » Abantu abangama-41 babulawa, uninzi lwalahleka e-India kubetheka komhlaba kunye nezikhukula
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Resorts • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Abantu abangama-41 babulawa, uninzi lwalahleka e-India kubetheka komhlaba kunye nezikhukula.
Ngaphezulu kwekhulu labakhenkethi babebambeke ngaphakathi kwindawo ekuchithelwa kuyo iiRamgarh emva kokuba umlambo iKosi ophuphumayo ugubungele imimandla eliqela.
Abantu abangama-35 babulawa kukhukuliseko lomhlaba olutsha ngoLwesibini kwiphondo laseHimalaya e-Uttarakhand.
Ubuncinane abantu abangama-30 babulawa kwiziganeko ezisixhenxe ezahlukeneyo kwindawo yaseNainital echaphazeleke kakhulu ngoLwesibini.
Amagosa athi iinzame zokuhlangula ziya kuthatha ubuncinci iintsuku ezimbini ukuya kwezintathu kwaye uninzi lwabantu lusalahlekile.
Ngokwamagosa aseburhulumenteni aseIndiya, ubuncinci abantu abangama-41 babulewe kwaye uninzi lwalahleka kukhukuliseko lomhlaba nakwizikhukula kumantla eIndiya, ezibangelwa zizantyalantyala zemvula.
Abantu abangama-35 babikwa babulawa kukhukuliseko lomhlaba olutsha ngoLwesibini emva kokubhubha kwabathandathu kwiziganeko ezifanayo kusuku olungaphambi kolo, e-Himalayan state e-Uttarakhand.
Ubuncinane abantu abangama-30 babulawa kwaye uninzi lwabantu lusalahlekile kwiziganeko ezisixhenxe ezahlukeneyo kwindawo yaseNainital echaphazeleke kakhulu ngolwe-Lwesibini, emva kwemvula enkulu-unogumbe omkhulu wemvula-ibangele uthotho lomhlaba kunye nokutshabalalisa izakhiwo ezininzi.
Iindawo ezininzi ezikude kummandla weenduli zibone umonakalo omkhulu kwimvula enkulu.
Umkhosi, uMkhosi weSizwe wokuSabela kwiNtlekele kunye nomkhosi ophendula kwintlekele kwilizwe lonke banegalelo kwiinzame zokuhlangula ezikhoyo e-Uttarakhand.
Olunye udilika komhlaba kwisithili esikumantla eAlmora sabulala abantu abahlanu emva kokudilizwa ngamatye amakhulu nodonga lodaka kwatshabalalisa ikhaya labo.
Abanye abantu abathandathu babulawa ngoMvulo kwizithili ezibini zaseburhulumenteni.
The Isebe leMozulu laseIndiya yandisa kwaye yandisa imozulu yayo ngolwesiBini, iqikelela ukuba "imvula enkulu" ine "imvula enkulu" kwingingqi kwiintsuku ezimbini ezizayo.
I-ofisi yezulu ithi imimandla eliqela ibinamanzi angaphezulu kwe-400mm (i-intshi ezili-16) zemvula izolo.
Abasemagunyeni bayalele ukuvalwa kwezikolo kwaye bayithintela yonke imisebenzi yezenkolo neyokhenketho kurhulumente.
Ngaphezulu kwekhulu labakhenkethi babencamathele ngaphakathi kwindawo yokutyelela eRamgarh, Indiya emva kokuphuphuma komlambo iKosi kuthe saa kwiindawo ezininzi.
Ababikezeli balumkisile ngeemvula ezininzi kwiintsuku ezizayo kwiphondo laseKerala apho izikhukula sele zibulale abantu abangama-27 ubuncinci ukusukela ngolwesiHlanu.
Uninzi lwamadama kurhulumente ayesondela kufutshane nomngcipheko wobungozi kwaye abasemagunyeni babesusa amawaka besiya kwiindawo ezikhuselekileyo njengoko imilambo emikhulu yayiphuphuma.
Indiya I-ofisi yemozulu ithi iimvula ezinkulu ziyakuphinda zikhuthuze urhulumente kwiintsuku ezimbini ezizayo emva kokuphumla okufutshane namhlanje.